yintoni isakhiwo esiqhelekileyo sovavanyo oluzenzekelayo?
Eyona Oomatshini Abazihambelayo Luluphi uLwakhiwo oluqhelekileyo lovavanyo oluzenzekelayo?
Luluphi uLwakhiwo oluqhelekileyo lovavanyo oluzenzekelayo?
Silwakha njani uvavanyo lwethu oluzenzekelayo? Okubaluleke ngakumbi, singazenza njani iimvavanyo zethu ezizenzekelayo zigqibe kwaye ziphindaphindwe?
Lonke uvavanyo oluzenzekelayo kufuneka luqinisekiswe ngokuchasene nemeko enye okanye ezingaphezulu ezimiselweyo. Oko kukuthi, ngelixa sisenza uvavanyo oluzenzekelayo, kuya kufuneka sazi ukuba kufuneka sithini na isenzo ukuze sikwazi ukubeka ingxelo efanelekileyo yovavanyo.
Uvavanyo oluzenzekelayo kufuneka luqhutywe ngokuzenzekelayo ngaphandle kongenelelo lwencwadi. Ngapha koko, iziphumo zovavanyo oluzenzekelayo kufuneka zichane kwaye zithembeke.
Kodwa siphumeza njani oku?
Impendulo ilula kodwa inye edla ngokungahoywa kwaye oko kukuthi, ukusetyenziswa kwe idatha elawulwayo .
Ukuqhuba uvavanyo, sifuna izinto ezintathu:
Elinye icandelo elinempembelelo enkulu ekuziphatheni kwesicelo ngu idatha ; Idatha efunekayo yesicelo kunye nedatha eyondliweyo kuyo.
Ukuzekelisa oku, cinga ngesicelo se-e-commerce apho abasebenzisi banokukhangela iimveliso.
Iphepha leziphumo lokukhangela liza kujongeka kwaye liziphathe ngokwahlukileyo xa kukho iimveliso kwiziko ledatha kunakwindawo yokugcina iziseko ezingenanto.
Ngokucacileyo iimvavanyo zethu ezizenzekelayo kufuneka zilungiselele iimeko ezahlukeneyo zesicelo kwaye ziqwalasele iindlela ezahlukeneyo zokuziphatha.
Xa sikhangela imveliso kwaye sibona uluhlu, sinokuqinisekisa njani iziphumo? Singaqiniseka njani ukuba le nto siyilindeleyo? Ngapha koko, singayenza njani le nkqubo iphindaphindwe ukuze kuwo onke amatsha sithole iziphumo ezifanayo?
Ungazenza njani iiMvavanyo eziZenzekelayo
Kutheni le nto sifuna idatha elawulwayo kuvavanyo oluzenzekelayo?
Ndikunika umzekelo wesenzo esibi endihlala ndibona sisenziwa kuvavanyo oluzenzekelayo:
Uvavanyo oluhlwempuzeke kakhulu kukuba sikhangela imveliso kwaye siyaqinisekisa ukuba sifumana uluhlu oluthile olubonisiweyo. Asizukujonga nzulu-okoko nje kukho iimveliso ezibonisiweyo kwiphepha, emva koko silungile. NGAPHAMBILI!
Ngelishwa, oku kungashiya imibuzo ingaphendulwanga:
Sazi njani ukuba idatha ivela kwiziko ledatha elichanekileyo? Ngaba siqhagamshelene neseva ehlekisayo eneedatha ezihlekisayo?
Sazi njani ukuba idatha ebuyisiweyo yile nto besiyikhangela?
Sazi njani ukuba inani elichanekileyo lezinto liboniswa kwiphepha leziphumo zokukhangela?
Kufuneka sikwazi ukubango kwiziphumo zovavanyo. Amabango kufuneka enze intsingiselo kwaye abe nokutshekishwa okusebenzayo.
Ukuba asiyilawuli idatha, emva koko asinayo indlela yokwazi okanye yokujonga le mibuzo ingentla.
Ukwenza uvavanyo oluzenzekelayo lube loluchanekileyo, kufuneka sihlwayele idatha ngokwethu. Uvavanyo oluzenzekelayo kufuneka lufake idatha eyaziwayo kwaye luqinisekise iziphumo ngokuchasene nedatha leyo.
Ukuba sithembele kwidatha esetyenziswa zezinye iinkqubo kwaye ezinokuthi zitshintshe, iimvavanyo zethu ezizenzekelayo ngekhe zithembeke. Asinandlela yokumisela iziphumo.
Ungazenza njani iimvavanyo ezizenzekelayo ziphindaphindwe
Uvavanyo oluzenzekelayo kufuneka lusebenze ngokuzenzekelayo. Ngendlela eyiyo ezenzekelayo, iimvavanyo zibangelwa yinkqubo enje nge-CI / CD yokwakha umbhobho elawula ukwenziwa kunye nokunikwa kwengxelo kweemvavanyo.
Kwakhona, indlela esiphatha ngayo idatha ichaphazela ukuthembeka kunye nokuphindeka kovavanyo oluzenzekelayo.
Isakhiwo esiqhelekileyo sovavanyo olulungileyo oluzenzekelayo
1-Cwangcisa [Yenza idatha eyaziwayo]
Uvavanyo lwe-2 [Sebenzisa idatha eyenziweyo]
3 - Teardown [Tshabalalisa idatha edaliweyo]
Yenza idatha yovavanyo
Kutheni le nto kufuneka sisete idatha yovavanyo ngalo lonke ixesha? Ngaba le ayizukusicothisa ngalo lonke ixesha siqhuba iimvavanyo? Ngaba asinakuseta nje kube kanye kwaye siphinde sisebenzise idatha efanayo?
Ewe, sazi njani ukuba kwenzeka ntoni kwidatha emva kokuba uvavanyo lugqityiwe? Mhlawumbi olunye uvavanyo lomntu luye lwaguqula okanye lwasusa idatha?
Singaqiniseka njani ukuba kwixesha elizayo xa sifuna ukwenza uvavanyo olunye, idatha sele ikho ukuba siyisebenzise?
Ukutshabalalisa idatha yovavanyo
Kutheni le nto kufuneka siyitshabalalise idatha yovavanyo eyenziweyo?
Kungenxa yokuba ekuphunyezweni okulandelayo, xa sizama ukwenza idatha yovavanyo, kuyakubakho idatha ephindiweyo okanye okubi kunokubakho ukungafakwa ngaphandle kovavanyo.
Ukuba asiyicimi idatha yovavanyo kwaye siqhubeka siphinda sisebenzise idatha yovavanyo ngokungacwangciswanga, emva koko, ixesha elingaphezulu kwisiseko sedatha liza kuba neenkcukacha ezininzi zovavanyo kwaye siza kuba nezinye iingxaki.
Qiniseka ukuba uyayila kwaye uyitshabalalise idatha yovavanyo.
Ukuze ufumane elona xabiso liphezulu kwimizamo yethu yovavanyo oluzenzekelayo, kufuneka siyile iimvavanyo ezifanelekileyo ngesakhiwo esihle.
Enye indlela esinokwenza ngayo ukuba uvavanyo lwethu luqikeleleke kwaye sizimisele kukulawula idatha yovavanyo. Endaweni yokuxhomekeka kwidatha esele ikhona kuvavanyo, iimvavanyo ezizenzekelayo kufuneka zihlwayele idatha njengenyathelo langaphambili lokwenza iimeko.
Ngokuhlwayela idatha yethu yovavanyo, sinokuvavanya iimeko ezahlukeneyo. Ngapha koko, sinokuqiniseka ukuba iingxelo ze-assert zijonga idatha eyaziwayo. Oku kuyakwenza ukuba uvavanyo luchaze.
Ukuqhuba iimeko zovavanyo oluzenzekelayo ngokuphindaphindiweyo, kufuneka siqinisekise ukuba iimvavanyo zethu zenza idatha yovavanyo ngaphambi kokuqhuba imeko. Oku kwenziwa kwicandelo lokuseta lovavanyo oluzenzekelayo.
Imeko ziya kuthi emva koko zisebenzise idatha eyenziweyo kwinyathelo lokuseta.
Okokugqibela xa sigqibile ukuvavanya, kuya kufuneka sibe nendlela yokucoca imeko yovavanyo ngokususa nayiphi na idatha eyenziweyo. Oku kwenziwa kwicandelo lokuncipha kovavanyo oluzenzekelayo.
Vavanya iingcebiso zokuzenzekelayo kunye neendlela ezilungileyo
Isicwangciso sovavanyo oluzenzekelayo lweeprojekthi ezi-agile
ezona fowuni zihlala ixesha elide ngo-2015
iterate kwimephu java
I-64gb yanele i-iphone 11
Ixabiso le-Apple iPhone SE, umhla wokukhutshwa kunye nokufumaneka kwelizwe
I-LG G5: Izinto ezili-10 ekufuneka uyazi ngaphambi (okanye emva) kokuthenga enye
Iapile kunye neapos; i-iPhone engapheliyo ye-6s kunye ne-6s Plus zithengiswa ngamaxabiso asezantsi aphambeneyo ixesha elimiselweyo
I-Apple iPhone 7 vs Samsung Galaxy S7 Edge: ukuthelekiswa kwekhamera
Ungasenza njani isibane sesaziso se-LED esifihliweyo kwiPixel yakho kunye nePixel 2
I-Samsung Galaxy S10, S10e kunye ne-S10 Plus: ungayithatha njani umfanekiso weskrini
Inkqubo yokwamkelwa ngokuchasene novavanyo lokwamkelwa
Iipilisi ezintlanu eziphezulu ezineeprosesa eziphambili ze-octa